Maxay tahay meesha ay iskaga mid yihiin dadka difaacaya Ilhaan Cumar & xaaskii Nabi Luud (CS)?! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maxay tahay meesha ay iskaga mid yihiin dadka difaacaya Ilhaan Cumar &...
Maxay tahay meesha ay iskaga mid yihiin dadka difaacaya Ilhaan Cumar & xaaskii Nabi Luud (CS)?!
(Hadalsame) 06 Juun 2022 – Xaaskii Nabi Luud iyo dadka difaacaya Sanatar Ilhaan. Adduunka qofkii ugu qabyaaladda badnaa abid waa xaaskii Nabi Luud (CS), sida ay ila tahay aniga.
Taariikhda markii aad aqrinaysid waxaad la yaabaysaa in qoftaasi aysan khaniisad ahayn, dan gaar ahna aysan ku qabin dhaqan xumadii weynayd ee ay ku kacayeen dadkeedu, haddana saas oo ay tahay waxay qabiilkeeda ku taageeraysay dhaqanka foosha xun ee ay dunida ku soo kordhiyeen, iyadoo leh waa xor, Ninkeedii Nabi Luud iyo dadka la socdana kula doodda, maxaa idin ka galay?
Taageerada iyo dhiirri-gelinta ay u muujisay dhaqanka xun ee reerkeeda waxaa u sii dheeraa in ay uga hiilisay xitaa ninkeedii oo Nabi ah, iyadoo soo jaajuustay martidii ragga u ekaa ee gurigeeda yimid.
Qabyaalad ka weyn ma jirto in ay si dhuumasho leh ugu tagto niman qabiilkeeda ah oo ay ku tiraahdo “Niman quruxdooda iyo caraftooda la yaabayo baa marti u ah ninkayga ee kaalaya kufsada”!
Kolkii dambe ee Ilaah uu amray Nabi Luud in uu tuulada kala cararo qoyskiisa oo aanay cidna gadaal soo fiirinna, qoftaasi qabyaalad darteed ayey gadaal u soo fiirisay iyadoo is leh maxaa reerkaaga gaaray, sidaas ayeyna iyadii ku halaagsantay oo dhagax ayaa ku habsaday.
Anigoo la yaaba markasta qabyaaladda qoftaas iyo sida ay u garab siinaysay xumaanta reerkeeda ee aysan wax faaiido ah ku qabin ayaa waxaan arkay dad Soomaaliyeed oo sanatar Rep. Ilhan Omar ku difaacaya dhambaalkii inkaarta ahaa ee ay ku taageeraysay khaniisiinta iyo khaniisnimada, kolkaas ayaan si fudud u fahmay in caadifadda qabiilku, kolkii ay kacsan tahay, ay dadka qaarkiis ka qaaddo fahamka iyo garashada.
W; Q: Maxamuud Bashiir Jaamac
Previous articleDad Soomaali badani ay ku jirto oo halis wayn laga badbaadiyey
Next articleXOG: Madaxda ilaa haatan aqbashay inay imanayso caleemo-saarka MW Xasan Sheekh